Aprilia NA 850 Mana na Honda NC 700 S DCT Motorcycles | Motorcycles katalọgụ na nkọwa, foto, ratings, reviews na discusssions
Honda rc166 isii cylinder bike si 1960 (5878)
Home → Aprilia → Aprilia NA 850 Mana na Honda NC 700 S DCT Motorcycles
19 Jun 2015 | Author: dima | Comments Off on Aprilia NA 850 Mana na Honda NC 700 S DCT Motorcycles
Gịnị mere ipigide na ịgbanwee ma ọ bụrụ na ndị nkà na ụzụ nwere ike ime ya? Automatic Motorcycles-aghọ ndị ọzọ ugbu, ma ihe bụ na ha bara uru, onye ikekwe n'ụzọ ziri ezi ihe eyesore? Variator na sọrọ-ipigide nnyefe tụnyere.
A nnukwu nkezi nke ọhụrụ na-emepụta ugbo ala na akpakanamde ụlọ ọrụ doo nzukọ edoghi na akpaka nnyefe.
Stammtisch ka kpụ ọkụ n'ọnụ mkparịta ụka a amenity nwere, n'ihi na afọ agaghịkwa, na a mmachi nke nnwere onwe ma ọ bụ ihe jọgburu onwe gearshift kwara arịrị, na o siri ike na onye ọ bụla. Kama na-abụghị bụ ikpe. E jiri ya tụnyere ntuziaka nnyefe kwere nkwa a n'oge a akpaka a uru na nkasi obi na obi iru ala, ma na kacha mma na-abawanye na Ọnọdụ.
All ndị mgbe chụpụrụ a ụgbọ ala na a sọrọ ipigide nnyefe ga-gosi na nke a passionately.
Automatic ọgba tum tum na motorcyclists, Otú ọ dị akwa emo, na kacha mma, zutere na skepticism site a mmachi nke dum "ndụ na nkà ihe ọmụma ọgba tum tum" na-ọbụna kwuru. Ma ọ bụrụ na ndị na-arụ ụka mgbe mgbe hụrụ ndị dị otú ahụ a igwe kwụ otu ebe wee na otú magburu onwe na-arụ ọrụ? Honda kwere dịkarịa ala na-aga n'ihu na-emekarị na akwadebeghị VFR 1200 na Crosstourer kwa ala-mmefu ego ọgba tum tum.
NC 700 S na X, gaa ọzọ na-eri nke 1000 euro na akpaka sọrọ-ipigide nnyefe (DCT).
Nke a dubious na mbụ n'anya Nchikota a mma ọgba tum tum na a lavishly emepụta abụọ-ipigide n'ime ebe naanị mgbe ị na-Honda Integra skuuta .
Ọ dabeere na otu engine na etiti dabeere na, dị iche na mpi dị na ya na a classic sọrọ-ipigide gia nnyefe.
The NC 700 S DCT nwere ike externally dabara nke ọma na-egosi na ha scooters mmekọrịta. Ma nke a ọhụrụ ngwakọ atụmatụ n'etiti skuuta na ọgba tum tum bụghị. ebe ọ bụ na 2007, na Aprilia Mana bụ na-amalite blocks.
Your 90 ogo V2 n'ụlọ ọrụ engine na 839 cubic sentimita si Gilera GP 800 skuuta na e nwetara nyochawa fọrọ nke nta na-agbanweghi agbanwe.
The nnyefe ruru na-nọgidere gbanwere a belt mbanye. Nanị ịkpọlite ​​ndị gas na ife efe were were gafee mba. Ma, otu kwesịrị, Otú ọ dị, na-ala-ahụkarị roba gbalaga mmetụta ịzụta.
Ma ugbu a ndị nwere a elu-revving 50-CC skuuta n'ihu anya ya na ntị na-ezighị ezi, nnukwu.
The n'ozuzu echiche nke mana na-eche site na zuru ezu na
adabako. A nsogbu na Isi, na Aprilia V2 n'ụlọ ọrụ na ọ dịkarịa ala 76 HP crankshaft ike bubbling aga ike.
Na nke a soundscape ọ dịghị onye na-eche na a skuuta. anya, na Mana ka kpamkpam na Italian finesse na mmetụta uche, kwenyere na lekwasị ikiri na ezi rụọ na ịtụnanya atụmatụ atụmatụ dị ka mgbanwe site eccentric Atụmatụ ụkwụ breeki pedal na gia menjuobi.
n'ozuzu, na ergonomics na a elu larịị, ọ bụ ezie na aghụghọ egwuregwu ikpere n'akuku bụ abụchaghị nri maka dịtụ elu-n'ịnyịnya handlebars. Ma ndị dị otú ahụ a skuuta ọgba tum tum bụ fun? Ya ike na gas pụta, na centrifugal ipigide na-ekpe na-agbalị ịmanye mmechi.
Gbasiri sprints n'ihu Aprilia. Ịnọgide na mgbe nile na-agba, na moto accelerates Mana pithy na punchy. sịkwa, n'ihi na elu isi ọsọ larịị na-enye otutu torque n'oge ọ bụla nke tupu, nke bụ, Otú ọ dị, esonyere ike vibrations.
Napụla niile agbanwerịta ibe, onye nwere ike obibi kpamkpam na ezigbo akara. maka 229 kg ngụkọta ibu, na mana nwere ike comfortably otutu kemfe tilt adọta, mgbe, enyere ha aka ndị magburu onwe arụ ọrụ Pirelli taya, stoic na ike ha orbits.
Mgbe nanị ọkara otu awa ule mbanye site Black Forest, otu ebube dị ka traditionalist motorcyclist otú i nwere ike ime na-enweghị ezigbo arụmọrụ-apụghị izere ezere omume mara mgbanwe.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị àjà ihe ọṅụṅụ kpọmkwem, ma nnọọ nsoro iwu mejuputa atumatu gas propulsion keere a ịrịba akụkụ. Atọ akpaka ụdịdị (touring, Rain, sports) dị na iche tumadi na isi ọsọ nso. Ònye chọrọ ikpebi ruru n'onwe, nke a dị ka na Honda aka toggle mgba ọkụ ma ọ bụ ụkwụ pedal na amaara (ịgbakwunye Honda: 250 Euro) ime.
Mgbe Mana asaa predefined gia oke dị sequentially. An actuator ịgbanwe anya n'etiti isi pole. Nke a na atụmatụ, Otú ọ dị, mkpa ọ dịghị onye, na Variator ekwekọ ma mgbe ngwa ngwa na mgbe coasting omume ọma na V2 n'ụlọ ọrụ engine.
Ọbụna engine breeki torque bụ na mechiri emechi trotul ezi usable. Enwe ihe na-akwọ ụgbọala ụtọ otú ahụ n'okpuru roba gbalaga mmetụta? nnọọ bụghị.
Ekochiela ihu ọṅụ nke na-akwọ ụgbọala site a kama akpata nkewa damping e ji mara.
The isi-ala ndụdụ na-ekiri kwa uko, na mgbanwe na mmiri preload na rebound ujo, dị nnọọ ala nsogbu ogbo. On ọjọọ korota amalite ebido mana arụchi ọma, verhagelt otu akara na-asọ oyi na continuity. Nke ahụ bụ ezigbo jọrọ njọ.
Otú ọ dị bara nnọọ ize ndụ bụ ABS votu njem na pillion njem. Itopusi na radial Brembo calipers ke otu na mode rabidly na nnukwu discs ma gbuo oge na ezi akara etiti oge, na antilock breeki usoro kpamkpam mma, mmadụ abụọ abụọ ime ihe na a rollover mgbe brek enweghị ọkwọ aka bụ fọrọ nke nta-apụghị izere ezere. The NC 700 S DCT nwere ike budata mma.
Ma mbụ ihe mbụ.
A Honda dealer akpọ engine nke NC na-akwanyere ya ike nnyefe a ụbọchị ole na ole gara aga dị ka a dizel engine na ọ kụrụ ntu n'isi. Ke ofụri ofụri a bike na-tụkwasịwo mfe na o siri ike. Upgrades amalite na-akpụ akpụ, eche ihe ọma.
Ergonomically ihe niile bụ ihe na ebe, nakwa n'ihi a na-adịgide adịgide ogbo bụ ihe ọjọọ ọ bụla. Mgbe malite na engine, miri, anya-atụ-na-nādabere Parallel Ejima-ekpughe ya ozugbo ihe mgbaru ọsọ: pragmatism na frugality.
Na nri aka ọgwụgwụ ị na-ahọrọ otu n'ime mmadụ abụọ ịnya ụgbọ ụdịdị: D maka nkịtị ọrụ, S maka a bit sportier locomotion.
The mbụ gia na-emekwa ụfọdụ na-akpaghị aka mgbe a na-egbu oge. A ịkpachara anya nje ọgụ nke trotul na, Oops, ibu na-eme ka oké kpaliri itu ukwu anya. The duel na okporo ụzọ bụ otú ahụ n'agbanyeghị 48 HP kacha ike a n'ezie ihe obi ụtọ. Pretty nnukwu otú ngwa ngwa na Sprint si a adade ọma.
Ma ná mpụga obodo nwere ndị NC àgwà ha. Ka ọ na-nwere mana ka a pụrụ iji mee ihe nchekwa ogige na dummy tank maka ibu (na NC dabara a zuru-iru okpu agha, na mana).
Ọ na-na-ọma na-ekiri Chassis nke budata mma karịa Aprilia. egwuregwu, ma ọ bụghị kwa uko gosi na ujo na ot ndụdụ. Bumpy tracks bụ n'ụzọ doro anya unexcited ka mụtachara Italian, na manageability nke Honda, ekele ya ala center mpo, na n'agbanyeghị nke iri kilo ibu ọkọlọtọ variant nke NC 700 S ka colossal.
Ọbụna na ala mkpọda ọ na-anọgide mgbe nile na ezubere iche maka akara. Ma ọ bụrụ na unu kwesịrị miscalculated tupu a usoro ụfọdụ, diski-amalite a na-atụ ọzọ nke ọma na n'enweghị na-enyemaka nke achikota ABS.
The chọrọ ntuziaka ike bụ, Otú ọ dị, tụnyere ndị dị nnọọ elu mana.
Na ugbu a na-arụ ọrụ dị ka sọrọ ipigide nnyefe? Ọfọn, ọ na-ekpughekwa ìhè na onyinyo. Mgbe nile na-azụ akpaka agbanwerịta ibe nnọọ were were na ngwa ngwa elu.
Dabere na trotul ọnọdụ na-aghọ kwekọrọ na ala ma ọ bụ elu na-agba.
Curvy tracks na uko ibe achọ a obere ndidi si n'aka ndị niile na akpaka jikọọ a dị ọcha enyemaka ọrụ na nkasi obi uru.
N'ihi na mgbe ụfọdụ tụụrụ agbanyụ na akpaghị aka, karịsịa na D-mode, tupu usoro na mgbe nile trotul ọnọdụ ka elu a gia, na mgbe ahụ na usoro onu ire mgbe n'itinye gas downshift ozugbo ọzọ.
Nke a na-akpali ka wetara n'iru degharịa. Na S mode, ọtụtụ bends na-eme mma n'ihi na ọmụmụ bụ isi amama on.
Ma ọ ga-mere ebe a dị ka nke ọma nke na-atụghị anya n'oge nwayọọ osooso full tilt otu gia dị elu, nke na-akpata dịkarịa ala iyatesịt. Ọkwọ ụgbọala si otú a na-akpọ n'elu imeghari ka ọnọdụ ndị a ma ọ bụ ka ịgbanwee gaa na ntuziaka mode. Karịsịa tupu obodo ntinye na-atụ aro iji na-erigbu a downshift na engine braking torque kemgbe nke isii gia ka nanị ihe karịrị 60 km / h na-anọgide kwere nkwa ọlụlụ.
Mee elu mee ala na obodo njikọ mgbe nile manụ, ukwuu n'ime enweghị isi toggling n'etiti ọmụmụ. Ebe a bụ Aprilia na-agba ịnyịnya ihe ndị ọzọ ọma na obi ike na nchikota nke ha Njirimara, karịsịa ndị enyi nke akọ nkasi obi. On ihe ma na Honda nēwere ihe ubi n'ihi na ala mmezi-akwụ ụgwọ na ala mmanụ ụgbọala oriri maka mmeri.
More a Atiya
Aprilia SportCity One 50 & 125 Motor skuuta Guide
Aprilia RSV4 R APRC Race arụzi Motorcycles, Ngwa, n'uwe, Parts
Ndenye siri na Aprilia Tuono V4 R APRC – Ọgba tum tum Tour News – Motorcycle…
Aprilia RSV4 APRC: a siri ike osompi
Harley-Davidson XR 1200 echiche Honda DN-01 Automatic Sports ugbo agha Concept Bajaj Discover Na a ọgba tum tum Honda Moto Guzzi 1000 Daytona Ọgwụ smart eScooter Bike Kawasaki Ea-6n Suzuki Colleda CO Suzuki B King Concept MV Agusta 1100 Grand Prix Honda DN-01 Honda X4 Low Down KTM 125 Race Concept Brammo Enertia Ducati Diavel Suzuki AN 650 Royal Enfield mgbo 500 classic Indian Chief Classic Ducati 60 Aprilia Mana 850 ọgba tum tum Honda Dream Kids Dokitto Suzuki B-King Final prototype Bike Kawasaki Square Anọ Honda Goldwing prototype M1 Ducati Desmosedici GP11